वेबसाइट सुविधाहरू चेकलिस्ट: तपाईंको साइटका लागि Ul 67 अल्टिमेट हभ्स Martech Zone
वाह। मलाई मनपर्दछ जब कसैले इन्फोग्राफिकमा चेकलिस्ट डिजाइन गर्छ जुन दुवै सरल र जानकारीमूलक हुन्छ। युके वेब होस्ट समीक्षा यस इन्फोग्राफिकलाई सुविधाहरूको सूची विकास गर्न डिजाइन गर्नुहोस् जुन उनीहरू विश्वास गर्छन् हरेक व्यवसायको अनलाइन उपस्थितिमा समावेश गरिनु पर्छ।
तपाईंको व्यवसाय अनलाइन सफल हुनको लागि तपाईंले यो निश्चित गर्नु आवश्यक छ कि तपाईंको वेबसाइट फिचर प्याक छ! त्यहाँ धेरै साना विवरणहरू छन् जसले सबै भिन्नता गर्न सक्दछ - दुबै ग्राहकहरूलाई विश्वास दिन र उनीहरूलाई अतिरिक्त प्रकार्यहरू प्रदान गर्दछ जुन रूपान्तरणहरूलाई मद्दत गर्दछ र तपाईंको साइटको समग्र प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्दछ। यसले तपाईंको व्यवसायलाई अर्कोको प्रतिस्पर्धात्मक किनार दिई अलग बनाउँदछ।
यो सूची कुनै आकार आकारको व्यवसायको लागि हो र ई-वाणिज्य साइटहरूले पनि एक हेराई गर्नुपर्छ। मैले उनीहरूको चेकलिस्टको अतिरिक्त केहि अधिक आईटमहरू थपेको छु जुन तपाईंले पनि समावेश गर्नुपर्नेछ!
समग्रमा, यो वास्तवमै अत्यावश्यक छ कि तपाईंको वेबसाइटले तपाईंको लगानी पूरा गरिरहन्छ - व्यापार चलाउन। यसको मतलब प्रत्येक आगन्तुकले आशयका साथ अवतरण गर्नुपर्दछ, उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने जानकारी फेला पार्नुहोस्, रूपान्तरणमा अगुवाइ लिनुहोस्, र तपाईंलाई आवश्यक सूचनाहरू र रिपोर्टिंग प्रदान गर्नुहोस् जुन तपाईं साइटलाई अनुकूलित गर्न जारी राख्न आवश्यक छ।
धेरै धेरै कम्पनीहरू अत्यधिक डिजाइनमा केन्द्रित छन्। एउटा सुन्दर डिजाइनले तत्काल प्रभाव प्रदान गर्दछ जुन तपाईले पर्यटकहरू चाहानुहुन्छ, तर जब सम्म साइट वास्तवमा काम गरिरहेको छैन र तपाईंको कम्पनीको लागि बिक्री ड्राइभ गरिरहेको छ, यो लगानीको लागि लायक छैन। यसको विपरित, एजेन्सीहरूले प्राय: सबै सुविधाहरू प्रदान गर्दैन तपाईंको साइट सफल हुन आवश्यक छ। रूपान्तरण, खोज, र सामाजिक अप्टिमाइजेसन add-ons हुनुहुन्न, तिनीहरू कुनै पनि वेबसाइट परियोजनाको लागि आधारभूत हुनुपर्छ।
तपाईंको पृष्ठ हेडरमा:
डोमेन नाम - त्यो पढ्न र सम्झन सजिलो छ। एक .com डोमेन एक्सटेन्सन अझै पनी प्रीमियम हो किनकी ब्राउजरहरूले कसरी समाधान गर्ने यदि तपाईंले विस्तार बिना त्यो डोमेनमा टाइप गर्नुभयो भने। नयाँ डोमेन एक्सटेन्सनहरू अधिक स्वीकार्य भइरहेका छन् (उदाहरण। यहाँ जोन!) त्यसैले चिन्तित नहुनुहोस्… कहिलेकाँही अर्को विस्तारको साथ छोटो डोमेन पनि लामो .com डोमेन भन्दा धेरै सम्झनात्मक समाधान हुन सक्छ जुन अर्थमा गर्दैन वा आवश्यक पर्दैन। ड्यास र अन्य शब्दहरू। तपाईं आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कि तपाईं कसरी डोमेन लिलामीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कसरी ठूलो सम्झौतामा। नयाँ पंजीकरणको साथ तपाईको खोजी गर्न रोक्नुहोस्।
लोगो - तपाईंको व्यवसायको पेशागत प्रतिनिधित्व अद्वितीय छ। लोगो डिजाइन एक कलाकृति हो ... यसको कन्ट्रास्ट आवश्यक हुन्छ, कुनै पनि आकारमा मान्यता, रचनात्मकता, रंग त्यसले तपाइँको दर्शकलाई लक्षित गर्दछ, र हुनसक्छ भिजुअल सन्देश पठाउने तपाइँको दर्शकलाई प्रभाव पार्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको लोगोलाई तपाइँको गृह पृष्ठमा फिर्ता लि link्क गर्नुहोस् किनकि धेरै जसो आगन्तुकलाई यसको प्रयोग हुन्छ।
ट्यागलाइन - तपाइँको व्यवसाय के गर्छ संक्षिप्त विवरण। यो सुविधा हुनु हुँदैन जबसम्म तपाईं एक ट्रिक उत्पादन वा सेवा हुनुहुन्छ। तपाईंको उत्पादनहरू वा सेवाहरूको फाइदाहरूमा ध्यान दिनुहोस्, सुविधा होइन। ग्रीस काट्छ बिहानको लागि उत्तम छ। तर यसको सट्टा कार्यान्वयन र एकीकरणको सूची टेक्नोलोजी लगानीमा तपाईंको फिर्ती साकार गर्नुहोस् को लागी धेरै राम्रो छ Highbridge.
फोन नम्बर -aक्लिक गर्न योग्य र ट्र्याकेबल फोन नम्बर (र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं उत्तर दिनुहुन्छ)। फोन नम्बर ट्र्याकिले तपाईंलाई अझ राम्रो विशेषता अभियानहरू र सम्भावनाहरू तपाईं कहाँ पुग्न मद्दत गर्दछ। प्रयोगकर्ताहरू प्राय जसो मोबाइल हुन्छन्, प्रत्येक फोन नम्बर क्लिक गरीएको लिंक हो भनि सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ... अब एक प्रयास गर्न को लागी एक मोबाइल स्क्रिन मार्फत फोन नम्बर प्रतिलिपि गरेर टाँस्न चाहान्छ।
कल-टु-एक्शन - आगन्तुकहरुलाई बताउनुहोस् कि तपाइँ उनीहरु लाई के गर्न चाहानुहुन्छ र तिनीहरुले यो गर्नेछन्। तपाईको साइटको प्रत्येक पृष्ठमा CTA हुनुपर्दछ। म अत्यधिक भएको सिफारिश गर्दछु कार्यमा कल गर्नुहोस् तपाईंको नेभिगेसनको शीर्ष दायाँ बटन पनि। यसलाई सजिलो बनाउँनुहोस्, आगन्तुकहरूलाई अब के गर्ने भन्नुहोस्, र ग्राहक यात्रा ड्राइभ गर्न मद्दत गर्नुहोस्।
शीर्ष नेभिगेसन - विवेकी विकल्पहरू तपाईंको साइटमा शीर्ष पृष्ठहरू फेला पार्न। मेगा मेनूहरू शानदार लाग्न सक्छ, तर राम्रोसँग डिजाइन नगरेसम्म धेरै विकल्पहरू तपाईंको श्रोताको लागि ठूलो हुन सक्छ। मैले स sites्लग्नता र पृष्ठ भ्रमणहरू स्काइरकेटमा देखेको छु जहाँ हामीले नेभिगेसन तत्त्वहरूलाई कम गरेका थियौं जुन उनीहरू थिए।
रोटी क्रम्ब नेभिगेसन - तपाईका आगन्तुकहरुलाई hierarchically नेभिगेट गर्न मद्दत गर्नुहोस्। कसैलाई शीर्षमा माथि बढ्ने साधन प्रदान गर्नु उत्कृष्ट छ। रोटी crumbs पनि राम्रो खोज अप्टिमाइजेसन उपकरणहरू हुन्, जुन तपाईंको साइट पदानुक्रमको राम्रो ज्ञानको साथ खोज ईन्जिनहरू प्रदान गर्दछ। विशेष गरी यदि तपाईं एक ई-वाणिज्य साइट हुनुहुन्छ वर्ग र उत्पादन एसकुयूको एक टनको साथ।
पृष्ठभूमि भिडियो, छवि वा स्लाइडर - नेत्रहीन बेच्ने बिन्दु र भिन्नता प्रदर्शन गर्नुहोस्। तपाई लाइटबक्सहरू सम्मिलित गर्न चाहानुहुन्छ। जब तपाईंसँग एक रेखाचित्र वा छवि छ कि तपाईंसँग विस्तृत विवरणहरू छन् तपाईको भ्रमणकर्ताहरू छानबिन गर्न चाहानुहुन्छ, छवि क्लिक गर्न योग्य बनाउन जहाँ छवि, ग्यालरी, वा स्लाइडर विस्तारित अधिकतम रियल इस्टेटमा विस्तार गर्दछ एक उत्तम प्रयोगकर्ता अनुभव हो।
समीक्षा र प्रशंसापत्र - सामाजिक प्रमाण आवश्यक छ। धेरै सम्भावित आगन्तुकहरू दुई धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्न चाहन्छन् ... के तपाईं आफूले गरेको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? त्यहाँ प्रमाण छ कि तपाईं सक्षम हुनुहुन्छ? पाठ प्रशंसापत्र महान हो, भिडियो अझ राम्रो छ। यदि तपाईं पाठको साथ जाँदै हुनुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् व्यक्तिको फोटो, तिनीहरूको नाम, शीर्षक, र स्थान सहित (यदि यो लागू हुन्छ)।
महत्वपूर्ण व्यापार जानकारी - तपाईको शारीरिक स्थान र मेलिंग ठेगाना तपाईको साइट फुटरमा समावेश गर्न उत्तम छ। यदि तपाईंको शारीरिक स्थान तपाईंको व्यवसायको लागि महत्वपूर्ण छ भने, तपाईं यसलाई तपाईंको शीर्षक ट्यागमा समावेश गर्न चाहानुहुन्छ, वा साइटमा मानिसहरूले तपाईंलाई सजिलै पत्ता लगाउन नक्सा प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। साथै महत्त्वपूर्ण छन् जानकारी को घण्टा र तपाईंलाई सम्पर्क गर्ने उत्तम तरिका।
अवश्य पनि, आधुनिक स्क्रिनहरूको साथ ... पट हरेक उपकरणको लागि फरक हुन्छ। यद्यपि प्राय जसो भागको लागि, यो स्क्रिनको क्षेत्र हो जुन तुरून्तै दृश्यात्मक हुँदैन जब कसैले तपाइँको ब्राउजरमा तपाइँको पृष्ठ खोल्छ। लामो पृष्ठहरूदेखि नडराउनुहोस् ... वास्तवमा, हामीले लामो जाँच गरेका छौं र व्यवस्थित पृष्ठहरू देख्दछौं, उनीहरूलाई आवश्यक जानकारीमा पुग्नका लागि क्लिक गर्ने आगन्तुकहरूलाई क्लिक गर्नुहोस्।
गुणवत्ता सामग्री - तपाईंको अनौंठो बिक्री प्रस्ताव आगन्तुकहरू र खोजको लागि वर्णन गरिएको छ।
मुख्य विशेषताहरु - तपाइँको उत्पादन र सेवाहरूको।
आन्तरिक लिंकहरू - तपाईंको वेबसाइटको भित्री पृष्ठहरूमा।
बुकमार्क - पृष्ठको सामग्री भित्रका लिंकहरू प्रयोगकर्ताहरूलाई पृष्ठमा उफ्रनु वा उनीहरूले खोजिरहेको जानकारी फेला पार्न मद्दत गर्न।
नेविगेशन - साझा पृष्ठहरूमा दोस्रो नेविगेशन। अनुक्रमणिकाको तालिका कहिलेकाँही बुकमार्कहरूको साथ राम्रो हुन्छ एक आगन्तुकलाई एक खण्डबाट अर्को भागमा जानको लागि।
सामाजिक संजाल - सामाजिक च्यानलहरूको माध्यमबाट तपाईंलाई चिन्न मानिसहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्।
अनलाइन कुराकानी सुविधा - द्रुत संचार जब आगन्तुकले खोजी गरिरहेका छन्। च्याटबोटहरू योग्यताका लागि अचम्मका उपकरणहरू बन्न गइरहेका छन् र च्याटको माध्यमबाट सही र सुविधाजनक अनुरोधहरू। त्यहाँ पूर्ण-समय तेस्रो-पार्टी रिसेप्शनिस्टहरू पनि छन् यदि तपाईंसँग व्यापार घण्टाको बखत र बाहिरको कुराकानी निगरानी गर्न जनशक्ति छैन भने।
व्यापार घण्टा - तपाईंको स्थानको साथ, यसले निश्चित गर्दछ कि पर्यटकहरूले उनीहरू कहिले जान सक्छन् जान्न सक्छन्। व्यापार घण्टा पनि तपाइँको साइटको मेटाडेटामा खोज इञ्जिनहरू, डाइरेक्टरीहरू, र अन्य साइटहरू जुन तपाइँको साइट क्रलमा समावेश गर्न सकिन्छ।
सम्पर्क जानकारी - शारीरिक र मेलि address ठेगाना (es), फोन नम्बर, र / वा ईमेल ठेगाना। यद्यपि, ईमेल ठेगाना प्रकाशित गर्न सावधान हुनुहोस्। क्रोलरहरूले निरन्तर तिनीहरूलाई लिन्छन् र तपाईं स्पामको एक विशाल इन्फ्लक्स प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
हाम्रोबारे सामग्री - तिम्रो कथा के हो?
भित्री पृष्ठ सामग्री -के उत्पाद र सेवा प्रस्तावहरू विस्तारमा।
सम्पर्क फारम - lएट आगन्तुकहरू जान्दछन् कि कहिले जवाफ अपेक्षा गर्ने।
क्याप्चा / एंटी-स्प्याम सुविधा - यदि तपाईं गर्नुहुन्न भने तपाईं दु: खी हुनुहुनेछ! बट्स निरन्तर साइटहरू क्रल गर्दै छन् र फारमहरू पेश गर्दै जब तिनीहरू प्रयोगमा छैनन्।
गोपनीयता नीति पृष्ठ - आगन्तुकहरुलाई थाहा दिनुहोस् कि कसरी तपाइँ तिनीहरुबाट स collect्कलन गर्ने डेटाको उपयोग गर्नुहुन्छ। यदि तपाईं आफ्नो साइटको साथ कुनै पनि प्रकारको सेवा प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई सेवा सर्तहरू पनि चाहिन्छ। तपाईंको उत्तम शर्त एक वकिलसँग कुरा गर्नु हो!
FAQ पृष्ठ - तपाइँको उत्पादन र सेवाहरूको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू।
ब्लग पृष्ठ - कम्पनी समाचार, उद्योग समाचार, सल्लाह, र ग्राहक कथाहरू तपाईं आफ्नो दर्शकहरु संग साझा गर्न सक्नुहुन्छ।
टिप्पणी सुविधा - प्रयोगकर्ता संलग्नता बढाउनुहोस्।
खोज पट्टी - आगन्तुकहरूका लागि खोजी गरिरहेको जानकारी पत्ता लगाउन सजिलो बनाउँनुहोस्।
साइडबार - तपाईंको भर्खरको वा सबैभन्दा लोकप्रिय ब्लग पोष्टहरू, कल-टु-एक्शन, वा सम्बन्धित पोष्टहरू देखाउनुहोस्।
सामाजिक मिडिया साझेदारी - प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाइँका लेखहरू सजिलैसँग साझा गर्न अनुमति दिन्छ।
विचार गर्न अन्य सामग्री र डिजाइन पोइन्टहरू:
सजिलैसँग पढ्नयोग्य, सफा फन्ट - याद गर्नुहोस् कि सेरिफ फन्टले वास्तवमा पाठकहरूलाई सामग्री सजिलो पार्न दिन्छ। हेडिंग्समा सेन्स-सेरिफ फन्टहरू र शरीर सामग्रीका लागि सेरिफ-फन्टहरू प्रयोग गर्नु असामान्य कुरा होइन।
लिंकहरू जुन बुझ्न सजिलो छ - र colorsहरू, रेखांकितहरू, वा बटनहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई क्लिक गर्न र निराश नहुने नेतृत्व गर्नेछ।
मोबाइल उत्तरदायी - एक आधुनिक साइट डिजाईन जुन मोबाइल उपकरणमा उत्कृष्ट देखिन्छ।
मोबाइल साइटमा ह्यामबर्गर मेनू
विरोधाभास र .्ग प्रयोग गर्नुहोस्
हिज्जे परीक्षक प्रयोग गर्नुहोस् - हामीलाई मन पर्छ Grammarly!
खोज इञ्जिन अनुकूलन:
शीर्षक र मेटा विवरण अपडेट - तपाइँको शीर्षक र मेटा विवरण अप्टिमाइज गर्नुहोस् ताकि खोज इञ्जिन प्रयोगकर्ताहरू मार्फत क्लिक गर्न अधिक सम्भावना हुन्छ।
स्वचालित साइटम्याप निर्माण - र साधारण वेबमास्टर उपकरणहरूमा सबमिशन।
URL संरचना अपडेट गर्न सजिलो - छोटो, संक्षिप्त यूआरएलहरू जसले क्वेरीस्ट्रि andहरू र नम्बरहरू प्रयोग गरीरहेका छैनन् साझा गर्न सजिलो र क्लिक गर्न बढी आकर्षक छ।
सर्भर र होस्टिंग:
छिटो र भरपर्दो होस्टिंग - हामीलाई मन पर्छ Flywheel!
स्वचालित वेबसाइट बैकअप सुविधा - तपाईको साइटलाई रातमा ब्याक अप गर्न र पुनःप्राप्ति गर्न सजिलो हुन्छ। धेरै राम्रो होस्टिंग प्लेटफार्महरु यो प्रस्ताव।
SSL / HTTPS - निश्चित गर्नुहोस् तपाईंको साइटसँग सुरक्षा प्रमाणपत्र छ, विशेष गरी यदि तपाईं आगन्तुकहरूबाट जानकारी स collecting्कलन गर्दै हुनुहुन्छ। आजकल यो अत्यावश्यक छ किनकि आधुनिक ब्राउजरहरूले सामान्य रूपमा सुरक्षित सामग्री बाहेक केही पनि त्याग्न सक्दछ।
प्राविधिक आवश्यकता बैकएन्ड:
एक CMS प्रयोग गर्नुहोस् - यो आजको सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव छैन सबै उपकरणहरू, एकीकरणहरू, र दक्षताहरू समावेश गर्न तपाईंको आफ्नै वेब सफ्टवेयर लेख्ने प्रयास गरेर। एक को लागी महान एसईओ क्षमताको साथ सीएमएस र यसलाई तुरुन्तै लागू गर्नुहोस्।
द्रुत पृष्ठ लोड गर्नका लागि अनुकूलित कोड - आधुनिक सीएमएस प्रणालीहरूले सामग्रीको भण्डार गर्न डाटाबेस र वेब पृष्ठलाई क्वेरी गर्न र प्रदर्शन गर्नको लागि समाहित गर्दछ। अत्यधिक जटिल कोडले तपाईंको वेब सर्भरमा भारी लोड राख्न सक्दछ (विशेष गरी जब एक साथ आगन्तुकहरूले तपाईंको साइटमा हेट गर्दै छन्), त्यसैले राम्रोसँग लिखित कोड हुनुपर्दछ!
क्रस ब्राउजर अनुकूलता
गुगल खोजी कन्सोल एकीकरण
गुगल एनालिटिक्स एकीकरण - अझ राम्रो गुगल ट्याग प्रबन्धक एकीकरण हुन सक्छ गुगल एनालाइटिक्स संग कन्फिगर।
माइक्रोफोर्मेटहरू - Google लाई पढ्नका लागि स्किमा.org ट्यागिंग (विशेष गरी यदि तपाईं एक स्थानीय व्यवसाय हो भने), ट्विटरका लागि ट्विटरकार्ड डाटा, र फेसबुकका लागि ओपनग्राफ ट्यागिंगले तपाईंको दृश्यता बढाउन सक्छ जब तपाईंको साइट साझा गरिएको छ वा खोजी र सोशल मिडियामा फेला पर्दछ।
मिडिया कम्प्रेसन - प्रयोग गर्नुहोस् छवि कम्प्रेसन सेवा छविहरूको गुणस्तर बिगार्न बिना तपाईंको छवि लोड गर्न को गति।
ढिलो लोड हुँदै - छविहरू, अडियो, र भिडियो लाई वेब पृष्ठमा तुरून्त लोड गर्न आवश्यक पर्दैन जबसम्म उनीहरूलाइ हेराई, हेरिएको, वा सुनेको हुँदैन। अल्छी लोडिंग टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नुहोस् (यसमा निर्मित WordPress) तपाइँको पृष्ठ प्रदर्शन गर्न पहिले ... तब आवश्यक पर्दा मिडिया प्रदर्शन गर्नुहोस्।
साइट क्याचिंग - जब तपाईंको साइट डेलिभर हुन्छ, यो छिटो हुन सक्छ। तर के गर्ने जब तपाईंसँग एक दिनमा हजारौं आगन्तुकहरू छन् ... यो क्र्यास हुन्छ वा जारी रहन्छ?
बेवास्ता गर्न को लागी चीजहरु:
भिडियो होस्टिंग सेवा प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईंको सर्भरमा भिडियोहरू लोड नगर्नुहोस्
पृष्ठभूमि संगीत वेवास्ता गर्नुहोस्
फ्ल्यास प्रयोग नगर्नुहोस्
साइटहरू प्रविष्ट गर्न क्लिक नगर्नुहोस् (जबसम्म उमेर प्रतिबन्धहरू छैनन्)
सामग्री, छवि, वा अन्य सम्पत्तिहरू चोरी नगर्नुहोस्
गोप्य जानकारी साझा नगर्नुहोस्
थप वस्तुहरू छुटे
न्यूजलेटर साइनअप - तपाईको साइटमा धेरै आगन्तुकहरू खरिद गर्न तयार हुँदैनन् तर उनीहरू पछि खरीद गर्न सदस्यता लिनेछन् वा सम्पर्कमा रहनेछन्। ईमेल क्याप्चर प्रत्येक व्यवसाय को लागी एक महत्वपूर्ण तत्व हो!
CDN - सामग्री वितरण नेटवर्क तपाइँको साइट काफी चाँडो हुनेछ।
Robots.txt - खोजी ईन्जिनहरूलाई उनीहरूले के गर्न सक्छन् र सूचक बनाउन सक्दैन, र तपाइँको साइटम्याप कहाँ फेला पार्न सक्छन् जान्नुहोस्। पढ्नुहोस्: खोज इञ्जिन अनुकूलन भनेको के हो?
ल्यान्डिङ पृष्ठहरू - ल्यान्डिंग पृष्ठहरू हुनै पर्छ कल-टु-एक्शन क्लिक गर्नुहुने प्रत्येक प्रेरित आगन्तुकका लागि गन्तव्य पृष्ठहरू तपाईंको रूपान्तरण सफलताको लागि महत्वपूर्ण छ। र ल्यान्डि pages पृष्ठहरू जुन ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन र मार्केटि auto स्वचालन प्लेटफर्महरूमा समाहित हुन्छ अझ राम्रो छ। पढ्नुहोस्: Land अवतरण पृष्ठ गलत बाट बच्न
पोडकास्टहरू - पोडकास्टिंगले व्यवसायसँग परिणाम ड्राइभ गर्न जारी राख्छ। व्यवसायहरूले अन्तर्वार्ताका लागि नेतृत्व लक्षित गर्न सक्दछ, ग्राहकहरूबाट प्रशंसापत्र लिन, उनीहरूका ग्राहकहरूलाई शिक्षा दिन र उनीहरूको उद्योगमा अधिकार निर्माण गर्न। पढ्नुहोस्: किन कम्पनीहरु पोडकास्टिंग छन्
भिडियो - साना व्यवसायहरूले पनि आधारभूत भिडियोहरू वहन गर्न सक्दछ ... केवल तपाईंलाई केवल तपाईंको स्मार्टफोनको आवश्यकता छ र तपाईं जानु राम्रो हुनुहुन्छ! व्याख्याकर्ता भिडियो देखि ग्राहक प्रशंसापत्र, तपाईं आश्चर्यचकित हुनेछ कति आगंतुकहरू पढ्दैनन्, तर तपाईंको साइट भर भिडियोहरू हेर्ने छन्। तपाइँको सामग्री भर मा एम्बेड गर्न नडराउनुहोस्। पढ्नुहोस्: किन उत्पादन भिडियो प्राथमिकता हो र5प्रकारका भिडियोहरू तपाईंले उत्पादन गर्नुपर्दछ
नक्सा - तपाईं संग पंजीकृत हुनुहुन्छ Google मेरो व्यापार? तपाईको व्यवसायका लागि नक्सा खोजीका लागि तपाई हुनु पर्छ। र म तपाईंलाई तपाईंको साइटमा नक्शा समावेश गर्न प्रोत्साहित गर्दछु।
लोगो बार - यदि तपाई B2B कम्पनी हुनुहुन्छ भने, लोगो पट्टी हुनु महत्वपूर्ण छ त्यसैले सम्भाव्यताले हेर्न सक्दछ कि तपाईं कोसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ। हामी एक निर्माण छवि घुमाउने विजेट यसै कारणले।
प्रीमियम संसाधनहरू - यदि तपाईं इन्फोग्राफिक्स, सेतो कागजातहरू, र केस स्टडीज जस्तो प्रीमियम सामग्री उत्पादन गर्दै हुनुहुन्न भने, तपाईं आफ्नो अवतरण पृष्ठहरूमा तपाईंसँग सम्पर्क राख्नको लागि आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्न धेरै तरिकाहरूमा हराउनुहुनेछ! पढ्नुहोस्: शीर्ष उत्पादनका लागि शीर्ष मार्केटिंग रणनीति
मोबाइल मानकहरू - फेसबुक तत्काल लेख, एप्पल समाचार, र गुगल द्रुत मोबाइल पृष्ठहरु नयाँ, एकीकृत सामग्री मापदण्ड हो जुन तपाइँ प्रकाशित गर्नुपर्दछ। पढ्नुहोस्: हामी अब एप्पल समाचारमा छौं
टैग: हाम्रोबारेहाम्रो बारेमा पृष्ठहरूampएन्टी स्पामपृष्ठभूमि संगीतब्लगरोटी crumb नेभिगेसनरोटी कुकुरब्रेडक्रम्बbreadcrumbsव्यापार घण्टाव्यापार जानकारीकार्यलाई कल गर्नुहोस्कार्य बटनमा कल गर्नुहोस्क्याप्चाचेकलिस्टटिप्पणी स्प्यामटिप्पणीसम्पर्क फारमctaछलफलडोमेन नामसोधिने प्रश्नसोधिने प्रश्नफ्लैशGoogle विश्लेषणgoogle mapgoogle mapsगुगल मेरो व्यापारह्यामबर्गर मेनूछवि स्लाइडरतस्बिरहरूआन्तरिक लिंकहरूआन्तरिक खोजील्यान्डिङ पृष्ठहरूलोगोलोगो रोटेटरमार्केटिंग इन्फोग्राफिक्समार्केटिंग पोडकास्टमोबाइल मेनूमेरो वेब प्रोग्रामरनेभिगेसनसमाचार पत्र साइनअपन्यूजलेटर सदस्यतान्यूजलेटरअनलाइन कुराकानीफोन नम्बरपोडकास्टिङप्रीमियर सामग्रीगुणस्तरीय सामग्रीउत्तरदायी डिजाइनसमीक्षारोबोटसाइट सुविधाहरूसाइट जानकारीस्लाइडरसाना व्यापारसामाजिक फलो बटनहरूसामाजिक शेयर बटनहरूस्पामट्यागलाइनप्रशंसापत्रशीर्ष नेभिगेसनभिडियो होस्टिंगभिडियोवेब साइट चेकलिस्टवेबसाइट व्यवसाय जानकारीवेबसाइट सुविधाहरूसेतो कागजहरू
नोभेम्बर २०, २००। 25::2016 अपराह्न
विचार गर्न अन्य सामग्री र डिजाइन पोइन्ट अन्तर्गत के म छोटो अनुच्छेद साथै बुलेट र नम्बरिंग थप्न सक्छु? हो, यिनीहरूले वेबमा सामग्री सफा र पढ्न योग्य बनाउने कुराको अंश हो (तपाईंको पोइन्ट # 31) तर म विश्वास गर्दछु कि तिनीहरू तपाईंको रिपोर्टको यस खण्ड भित्र एक विशिष्ट उल्लेख पाउन योग्य छन्।
अक्टूबर २१, २०१ at २:०25 बिहान
मैले एक वेबसाइट चेकलिस्ट सिर्जना गरें जुन अलि बढी प्राविधिक हो र विकासकर्ताहरूलाई मद्दत गर्न सक्दछ जब नयाँ साइट सुरू गर्दा: http://nali.org/website-checklist/
साझेदारीको लागि धन्यवाद, निक!
नोभेम्बर २०, २००। 18::2020 अपराह्न
काल्पनिक, यति उपयोगी! धन्यवाद